विश्वको निद्रा घट्दो, यी कारणले मानिसहरु कम सुत्ने गर्छन् • Nepal's No. 1 Digital News Paper .
विश्वको निद्रा घट्दो, यी कारणले मानिसहरु कम सुत्ने गर्छन्
तपाईलाई थाहा छ, अहिले संसारभरको पहिलाको तुलनामा मानिसहरु कम सुतिरहेका छन् ? पछिल्लो ७० वर्षमा मानिसको निद्रा २० प्रतिशत घटेको छ।
एक अध्ययनका अनुसार सन् १९४० को दशकसम्म संसारमा अधिकांश मानिस राति करिब ८ घण्टा निदाउँने गर्दथे । तर, अहिले मानिसहरुको सुत्ने समय घट्दो क्रममा छ। अमेरिकाको बर्कलेस्थित क्यालिफोर्निया युनिभर्सिटीका प्रोफेसर मैट वाकरकाअनुसार अहिले हामी राति औषतः ६.७ वा ६.८ घण्टा मात्रै सुत्न पाउँछौ । अर्थात पछिल्लो ७०–८० वर्षमा मानिसको निदाउँने समय २० प्रतिशत कम भएको छ ।
मानिसको जीवनमा निद्रा सबैभन्दा मूल्यवान कुरा हो । अहिले हामी सबैसँग त्यसको कमी छ । संसारभरका मानिसहरु निद्राबाट समस्यामा छन् । यसको नतिजा खतरनाक हुन सक्छ ।
अहिले मानिसको जीवन ग्याजेट्सको जालमा फसेर बसेको छ । कम्प्युटरले हाम्रो जीवनको ठुलो परिवर्तन ल्यायो । इन्टरनेटले पनि संसारमा ठुलो परिवर्तन ल्याउने काम गरेकै हो । यसले हाम्रो जीवनमा धेरै नै नयाँ कुरा आयो । यो आएपछि अर्थव्यवस्था पनि बद्लियो । अहिले संसारमा चौबीसै घण्टा काम चलिरहन्छ ।
तपाईको कार्यालयले तपाईलाई रातरातभर उल्लुलाई जसरी जागा राख्छ । कयौपटक काम यति धेरै हुन्छ कि त्यो पूरा गर्नका लागि मानिसहरु रातरातभर जागै रहन्छन् । आफूलाई जगाई राख्नका लागि तपाई कफी र चियाको साहरा लिनुहुन्छ ।
कतिपयले मदिरा र चुरोटको सहयोग लिन्छन् । तर, हामी यो भुलिरहेका हुन्छौ कि यो सबैले हाम्रो निद्रा खराब गरिरहेको छ । इन्टरनेटले वास्तवमै हाम्रो शान्ति हामीबाट खोसिरहेको छ ।
हाम्रो निद्राको दोस्रो ठुलो शत्रु हो हाम्रो मोबाइल फोन । यदि कम्प्युटरमा काम गरिरहेका छैनौ भने पनि हामी फोनमा व्यस्त रहन्छौ । किनभने फोन पनि अब मिनी कम्प्युटर बनिसकेको छ । अवस्था यहाँसम्म पुगिसकेको छ कि हामी सुतेरै पनि फोन चेक गरिरहेन्छौ । कुनै म्यासेज त आएको छैन, कुनै इमेल त आएन । केही छैन भने सुत्नुअघि एकपटक फेसबुक त हेरौ । यही हो अवस्था ।
कुरा मात्र फेसबुक हेर्नेमै सीमित रहँदैन । कुराको सिलसिला चल्न सक्छ । औलाहरु मोबाइलमा व्यस्त हुन्छ । निद्राले भारी बनेका परेलाहरु मोबाइल थन्क्याएर सुत्ने प्रतिक्षा गरिरहेको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा आँखाको यो प्रतिक्षा दिनै जाने गरी लामो पनि हुन सक्छ । हाम्रो यो बानीले हाम्रो निद्रामा असर पुराइरहेको हुन्छ ।
प्रोफेसर वाकरका अनुसार हाम्रो रहनसहन पनि हाम्रो निद्रा खराब गर्नका लागि निकै जिम्मेवार छ । उदाहरणका रुपमा अहिले हरेक कार्यालयमा आवश्यकताअनुसार तातो र चिसो गर्नका लागि एयरकन्डिशनर र हिटिङ सिस्टम लगाइएको हुन्छ । घरको पनि अवस्था यही हुन्छ ।
नीलो उज्यालोबाट समस्या
सुर्य उदाउँदा र अस्ताएसँगै तापक्रममा पनि उचारचढाव आउँछ । यस्तोमा हाम्रो शरीर आरामको खोजीमा हुन्छ । तर हामी उसको इच्छालाई नजरअन्दाज गरेर आफ्नो काम पूरा गरिरहन्छौ । प्राकृतिक नियमअनुसार जब हाम्रो शरीर सुत्न चाहन्छ, हामी सुत्न दिँदैनौ । जब हामी सुत्न चाहन्छौ तब शरीर त्यसका लागि तयार हुँदैन ।
निद्राका लागि हामी अनेक प्रकारका उपाय अपनाउँछौ । महंगामहंगा डस्ना किन्छौ । घरमा यस्तो महोल तयार पार्छौ कि जसमा हामीलाई तत्काल निद्रा लागोस । तर, दुर्भाग्य त्यस्तो हुँदैन ।
उज्यालोका लागि घरमा लगाइने बत्ती पनि यसका लागि निकै हदसम्म जिम्मेवार हुन्छ । यसका साथै नीलो रंगको एलइडी स्क्रीन पनि हाम्रो निद्रालाई ब्रेक लगाउन जिम्मेवार हुन्छ । मेलाटोनिन नामको हर्मोनले हाम्रो शरीरलाई निद्रोको सिंग्नल दिन्छ । तर, यो नीलो उज्यालोले त्यसलाई आफ्नो काम गर्नबाट रोक्छ ।
कतिपय अवस्थामा सामाजिक दबावको असर पनि हाम्रो निद्रामा पर्ने गर्दछ । तपाई सोचिरहनु भएको होला त्यो कसरी ? हाम्रा सामु ठुला सफल व्यक्तिहरुको उदाहरण प्रस्तुत गरिन्छ । जस्तो कि पटकपटक यो भनिन्छ कि प्रधानमन्त्रीहरु मात्र चारपाँच घण्टा सुत्छन् । यही कुरा अन्य ठुलाठुला नेताहरु पनि गर्छन् ।
बलिउड स्टार शाहरुख खानका अनुसार उनी मात्र चार घण्टा सुत्छन् । सफल हुनका लागि उनले धेरै मेहनत गर्नुपर्दछ । हामीमाथि यो पनि दबाव बढ्छ कि धेरैभन्दा धेरै काम गरौ ।
यो चक्करमा हामी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुसको उदाहरणलाई पनि किनारा लगाउँछौ । बुश दिनहुँ नौं घण्टा सुतेर पनि अमेरिकाको राष्ट्रपति बने । त्यसो भए के हामी उनको कदममा हिड्न सक्दैनौ ।
करिब दश हजार अध्ययन प्रतिवेदनले यो सावित गरिसकेको छ कि जो ६ घण्टा या त्योभन्दा कम निदाउँछ, उसले आफ्नो स्वास्थ्यसँग खेलवाड गरिरहेको हुन्छ । प्रोफेसर मैन वाकरका अनुसार अल्जाइमर, क्यान्सर, मोटोपन, मधुमेहजस्ता रोग हरेक समय तनावमा रहनु र कम निदाउँदा पनि हुन्छ । यहाँसम्म पकि कतिपय अवस्थामा निद्राको कमीले आत्महत्याजस्तो भयानक सोचसमेत दिमागमा आउन सक्छ ।
तपाईमा पनि त्यस्तो कुनै ख्याल दुईबाट चार नहोस् त्यसअघि नै आफ्नो आनीबानी बदल्नुस् । सही समयमा खाना खानुस । समयमा सुत्नुस । याद राख्नुस्, निद्रा निकै ठुलो महत्व छ । यसको मूल्य यसैले मात्र बताउन सक्छ ।
न्युरोसाइन्टिस्ट मैट वाकरसँग बीबीसीका जेम्स फलेचरले गरेको कुराकानीमा आधारित ।